दुर्गा पौडेलको प्रश्न, बाँस्कोटा कमिशन प्रकरणको पर्दा पछाडि को को ? - Dainik Online Dainik Online
दुर्गा पौडेलको प्रश्न, बाँस्कोटा कमिशन प्रकरणको पर्दा पछाडि को को ?
प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १० : ४७
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोचाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड कमिशन प्रकरणको पर्दा पछाडि को को भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बाँस्कोटाको कमिशन प्रकरणमा अरुको पनि संलग्नताको आशंका गर्दै राजमो प्रवक्तासमेत रहेकी सांसद पौडेलले पर्दाको पछाडि को को छन्, तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘एकजनाले मात्र त्यति ठूलो घटना घटाउन सक्ने सम्भव नभएको बताउँदै पौडेलले पर्दा पछाडिको सत्य के हो ? त्यसको पनि छानबिन गरी तिनलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ’, सांसद पौडेलले भन्नुभयो ।
देशमा अहिले एकपछि अर्को गर्दै ठूला–ठूला भ्रष्टाचाका काण्डहरु देखिइरहेका भन्दै पौडेलले अधिकांश भ्रष्टाचार राजनीतिक तहबाटै भइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले हरेक आयोजनामा कमिशनबिना काम नहुने भन्दै भ्रष्टाचारका कारण राज्यको ढुकुटीमा केही व्यक्तिको ब्रम्हलुट भइहेको र विकासका कार्य प्रभावित बनिरहेको बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचारका प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सांसद पौडेलले माग गर्नुभयो । ‘भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले त्यसको दुष्परिणाम भयंकर रुपमा आउने देखिन्छ’, सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘भष्टाचारको कुरा मन्त्रीसम्म आएको हुनाले यो सदनमा प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार ७० करोड कमिशन मागेको भन्ने हल्ला ‘फ्रड’ भएको र गोकुल बाँस्कोटा निर्दोष रहेको भन्दै बचाउ गर्नुभएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि एक कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिशन मागेको अडियो बाहिरिएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो ।